नेपालमा फोरजी प्रयाेगकर्ताः टेलिकमको हजारले बढ्दा एनसेलकाे २ लाख ! – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
नेपालमा फोरजी प्रयाेगकर्ताः टेलिकमको हजारले बढ्दा एनसेलकाे २ लाख !
नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको कार्तिक महिनाको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा फोरजी प्रयोगकर्ताको संख्या कूल ४७ लाख पुगेको छ ।
तथ्याङ्कअनुसार सरकारी सेवा प्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकमले प्रयोगकर्ता संख्या उल्लेख्य रूपमा बढाउन सकेको छैन । टेलिकमले गत
असोज १५ देखि काठमाडौं उपत्यका र पोखरा बाहिरका २६ वटा सहरमा फोरजी सेवा विस्तार गर्ने याेजना अघि सारेको थियाे । प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले नेपाल टेलिकमले प्रदान गरेको फोरजी सेवा लिने ग्रहाक एक महिनामा एक हजारमात्र बढेका छन् । सोही समयावधिमा निजी टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले भने करिब २ लाख फोरजी प्रयोगकर्ता थप्न सफल भएको छ । तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा तीव्र गतिको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट प्रयोगकर्ता २ करोड ११ लाख ७ हजार ५ सय ९० पुगेको छ । यसअन्तर्गत फाइबर र फाइबररहित एवं मोबाइल ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पर्छ । कूल इन्टरनेट प्रयोगकर्तामध्ये तीव्र गतिको मोबाइल ब्रोडब्यान्ड फोरजी प्रयोगकर्ताको संख्या ४७ लाख ९१ हजार ८ सय ९६ पुगेको छ, भने थ्रिजी प्रयोगकर्ताको संख्या १ करोड १४ लाख १८ हजार ८ सय ९० पुगेको छ ।
फोरजी प्रयोगकर्तामा नेपाल टेलिकमतर्फ ८ लाख ३९ हजार ५ सय ८० मात्रै रहेका छन् । असोज महिनामा यो संख्या १ हजार ४ सय ५८ले मात्रै कम थियो, जुन एक महिनामा नेपाल टेलिकमले थपेको प्रयोगकर्ताको संख्या हो । निजी सेवा प्रदायक एनसेलले भने एक महिनामा फोरजी प्रयोगकर्ताको संख्या २ लाख २३ हजार ४ सय ३ ले थप्दै ३७ लाख १३ हजार ४ सय ३१ पु-याएको छ । जुन नेपाल टेलिकमको भन्दा ४ गुणा बढी हो ।
यसबाहेक स्मार्ट टेलिकमको फोरजी प्रयोगकर्ताको संख्या २ लाख ३८ हजार ८ सय ८५ पु-याएको छ । हाल नेपालमा कुल टेलिफोन प्रयोगकर्ता संख्या ४ करोड २५ लाख ५६ हजार ९ सय ६६ पुगेको छ । नेपालको जनसंख्याभन्दा बढी टेलिफोन प्रयोगकर्ता देखिनुमा एकै व्यक्तिले दुई सीम प्रयोग गर्नु र कसैको सीम कार्ड बिग्रेर नयाँ प्रयोग गर्नु भन्ने बुझिन्छ ।
चीन, अमेरिका, जापानलगायतका मुलुकमा ५ जीको तिव्र विकास भइरहेको छ । यसबेला नेपालको सरकारी सेवा प्रदायक कम्पनीले देशमा ४ जीकै विस्तारसमेत गर्न नसकेको अवस्था छ । असोज १५ देखि फोरजी विस्तार गर्ने योजना भएपनि उल्लेख्य रुपमा प्रयोगकर्ता भने नबढेको देखियो ।
Previous दक्षिण कोरियाको आर्थिक वृद्धिदर दशककै न्यून
Next आठलाख घुससहित गाउँपालिका अध्यक्ष पक्राउ